Amazon mafaira crypto chokuita bvumidzwa kuti mashoko hova - Blockchain News
Amazon mafaira crypto chokuita bvumidzwa kuti mashoko hova
Amazon akunda munhu bvumidzwa kuti kumhanyira Data pamusika aigona kubvumira subscribers kugamuchira-zvechokwadi nguva cryptocurrency mutengapwe Data.
Amazon kwakaita bvumidzwa rinotsanangura hurongwa umo nomumwe mashoko Hova kungasava saka zvinokosha pachavo, kushandisa Bitcoin uye cryptocurrency kutengeserana Data muenzaniso. Asi nokuda tichibatanidza date iyi mashoko mamwe mabhuku, “humboo rukova anyanya inokosha.”
The bvumidzwa inoti: “Semuyenzaniso, rimwe boka zvigadzirwa kana Indaneti retailers vanogamuchira Bitcoin kwema angava kutumirwa kero kuti Nenyaya Iyi pamwe Bitcoin kero. The zvemagetsi retailers anogona nokubatanidza kutumirwa kero pamwe Bitcoin kutengeserana Data rokusika correlated umboo uye republish humboo abatanidzwa kuva mubatanidzwa date rukova.”
Previous Post:Inishuwarenzi bhuroka Marsh anoshanda IBM musi Blockchain papuratifomu
Next Post:Korean crypto exchanges vanotanga kuzviremekedza murau nesimba
Chivabvu 15, 2018 pa 12:18 PM
Whoah this blog is great i love reading your articles. Ramba wakadaro rakanaka! You know, lots of people are looking around for this info, you could help them greatly.